ဖတ်/ရွေး ဆွေးနွေးခန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဖတ်/ရွေး ဆွေးနွေးခန်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Aug 20, 2013 in Best Web Awards | 10 comments
အန်တီဘုမ်မာ ကတော့ ပြောပြောတတ်တယ်။ ဖတ်ရွေး ဆိုတာ “ဂျီးဒေါ် နွားကျောင်းတဲ့ အလုပ်” ပါတဲ့ …..။
ဂျီးဒေါ် နွားကို ကျောင်း ပေးရတယ် ဆိုတော့ နွားကျောင်းခ မရ။ အခန့်မသင့်ရင် အဆူအဆဲပါ ခံရနိုင်ကိန်း ရှိသေးတယ်။
ကိုယ့်ဂျီးဒေါ်ရဲ့ နွားဆိုတော့ အမျိုးတွေမို့ ဖရီး ကျောင်းပေးရတယ်။ ဂျီးဒေါ် ကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ်က အလကား လုပ်ပေးနေရတာ။ အခုလည်း မန်းဂဇက် က ဖတ်/ရွေး ဆိုတာလည်း ဒီလိုပါပဲ ….. တဲ့ …။ ဒါ …. တား ပေါဒါ မီဟုတ်ဝူးနော်။ သူ .. သူ .. တီတီဘုမ်မာ ပြောပြောနေတတ်တာကို ပျံပေါပျဒါ …. ဟီးးဟီးးး
ဒီပို့စ်တင်တာက အခြားအကြောင်းအရာကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်စုံတစ်ခု ရင်ထဲ ခုနေလို့ပါ။ (အလဲ့ … ကာရံတွေ နဘေတွေနဲ့ ကဗျာဆန်လှချည်လား)
လက်ရှိ ဖတ်ရွေး အုတ်ကထဂျီး ဥကြီးမိုက် က ဟိုပို့စ်ထဲမှာ ဂလို ပြောသွားတယ် …။
အဲဒီလက်ခံရရှိသမျှ ရွာသူားတွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပို့စ်တွေကိုစုစည်းပြီးဗုတ်ပို့စ်တင်ပေးသွားပါမယ်…
အုတ်ကထဂျီး က ဒီလိုဒွေ ပြောသွားဘေမယ့် ကျန်ဒဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဒွေက ဘာမှ ဝင်ပြောဘူးရယ် ….။
အဲ့ဂလောက်ထိ … အုတ်ကထဂျီးကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကျောက်ရဘေဒဂိုး ….။ (ဂျစ်ကိုဂျီးဆီက ဒီပညာယူထားအုံးမှ)
ဒီတော့ .. အုတ်ကထဂျီး ပြောသွားဒါဂို အတည်ပဲ ယူရတော့မှာလား၊ ဘာလား၊ ညာလား၊ ကွိစိလား၊ ကွစလား ဆိုတာ ဖြစ်နေလို့ပါ။
အိုက်ဒါ …. ဘိုလဲ … အရပ်ကတို့ …… ?????
ဒါလေးကို ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးလို့ … အခုပို့စ်တင်ပြီး မေတ္တာရပ်ပါတယ်ဗျား ….။
စကားမစပ် ဖတ်/ရွေး ဆိုတာကို နည်းနည်းလေး ထည့်ပြောပါ့မယ်။
ဖတ်/ရွေး ဆိုတာ ဒီမန်းဂဇက်မှာ ပေါ့နော်။ တစ်လအတွင်း တက်လာသမျှ ပို့စ်တွေထဲက ပေါ့နော်။ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဘာတွေညာတွေထဲမှာ ပါပြီးသားတွေ မပါဘူးပေါ့နော်။ အခြားဆိုက်တွေမှာ တင်ပြီး ဆုရပြီးသားတွေ မပါဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ်တိုင်ရေးတွေပေါ့နော်။ ဒီလိုဟာတွေထဲကမှပေါ့နော်။ မန်ဘာအများစု အကြိုက်ဆုံးပို့စ်ကိုပေါ့နော်။ ဒီပို့စ်ကို တစ်လတာအတွက် Post of the Month ပေးတယ်ပေါ့နော်။ ဒီဆုကို ၆ လတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်တတ်တဲ့ မန်းဂဇက် မန်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲမှာပေါ့နော်။ ဆုပေးတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါပေါ့နော်။ ဒါက တားသိဒလောက် ပေါဒါ။
ပို့စ်ရွေးဖို့အတွက် ယနေ့ပို့စ်ထဲမှာ ဗုတ်ထည့်ဖို့တော့ မပြောကြပါနဲ့။ ဒါက မလွယ်ဘူး။ အခုတောင် လူဝင်လူထွက် စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ ပို့စ်တွေ အသစ်ထပ်မထည့်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်တာတောင် Update မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဝင်ပြောတဲ့လူ မရှိဘူး။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ယနေ့ပို့စ်ထဲ ဗုတ်ထည့်လည်း နည်းမှာပဲ။ (ကျိုပေါထားဒါ … ဟီးးးဟီးးး)
ကိုင်း .. ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ကျုပ်တော့ ပြောချင်ဒါ ပြောလို့ ပြီးသွားပြီ ….။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြောချင်တာ ပြောခဲ့ဂျ … အဲ .. ဆွေးနွေးပေးဂဲ့ဂျဘာအုံးလို့ ….။
သာဒု …. သာဒု …. သာဒု …..။
ဖတ်ရွေး က နဲနဲ မောသွားလို့ ခဏ နား နေတာပါ အခြစ်ခံရဆုံးလူသား မောင်အံ။
အမောပြေရင် အသွင်ဆန်း တွေ နဲ့ ထပ်က ကြဦး မှာပါ။
အပြင်မှာ ခေါင်းပူလွန်း နေလို့ ခေါင်းရှောင် နေမိတာပါ။
ကူနိုင်တဲ့အပိုင်းဆို ကူ ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲဗျ ။
ရေးလည်း မရတဲ့အတူတူ ဆိတ်အဝင်ဇားဗူး…. ချီးထုပ်ကြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်ရွက်ကြ…
Share this: ဆိုတဲ့ထဲက.. ဖေ့စ်ဘုတ်လင်ခ့်လုပ်ပေးလိုက်တယ်..
(၁) အရမ်းမမြန်ဘူး.သဂျီး..စောင့်ရတယ်… ကော်နက်ရှင်မကောင်းရင် မလွယ်ဝူး..
(၂) ကိုယ့် ဖဘ ဝေါမှာ တက်လာမှာလေ… လူတိုင်းက လုပ်ချင်ပါ့မလား…
အများအကျိုးဆောင်ပြီး သာဒု သာဒု ခေါ်ရလွန်းလို့……..
ဘုန်းကြီးဝတ်သွားမှာတောင် စိုးရိမ်မိတယ်။ :loll:
အဲ့ ဖွဘွတ်​ ဆိုတဲ့ အ​ကောင့်​မရှိရင်​ သို့မဟုတ်​ အသိမခံနိုင်​ရင်​ သို့မဟုတ်​ ရွာသားဆိုတာ နသိ​စေချင်​ရင်​ …????
မဟာရာဇာနှင့် ပေါင်းကာ နည်းပညာ တာဝန်ခံ/လက်ထောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အသိပေးပါကြောင်း။
တရားမဝင် ပြောထားရာက တရားဝင် ထပ်ပြောပါသည်ခင်ဗျ
သူများတွေရွှေးတာကိုဘဲ လက်ခုပ်လိုက်တီးအားပေးမယ်ဗျာ။ ၆ လတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲလေးတော့ အမြဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။